User talk:咽頭べさ - Wikimedia Incubator
-- Welcoming Bot 18:24, 29 July 2020 (UTC)[reply]
3 S'gaw Karen projects
4 Meta Wiki
Last month, you created this portal page, but then nothing else are contributed, I wonder if you're interested in contributing this project or not? --Liuxinyu970226 (talk) 11:47,4March 2021 (UTC)[reply]
Hello@Liuxinyu970226:, I'm trying to haveaPa'O language wikipedia, But I am notaPa'O people. I havealittle knowledge of Pa'O language, now I am looking for an author of Pa'O language. Related to Pa'O language, I wroteapost on Facebook looking for help from Pa'O people for Pa'O language wikipedia thank you very much.--咽頭べさ (talk) 13:36,4March 2021 (UTC)[reply]
You should read I:CASE before creating the template/module that start withalower case letter after the prefix. Thanks. Ninja✮Strikers «☎» 15:45, 22 September 2021 (UTC)[reply]
Hello@Ninjastrikers:, I copy the original version of Template and Module, everything I do now is based on the original Template and Module.--咽頭べさ (talk) 03:06, 23 September 2021 (UTC)[reply]
ဆိုလိုတာက တမ်းပလိတ်/မော်ဂျူး/ကဏ္ဍတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ Template:Wp/blk/ ဒါမှမဟုတ် Module:Wp/blk/ ဒါမှမဟုတ် Category:Wp/blk/ ရဲ့နောက်မှာ အင်္ဂလိပ်စာလုံးအသေး (lower case) နဲ့မစဘဲ စာလုံးကြီး (Capital letter) နဲ့ စရေးဖို့ကိုပြောတာပါ။ ဥပမာ Template:Wp/blk/coord အစား Template:Wp/blk/Coord ဆိုပြီး C အကြီးနဲ့ လုပ်ဖို့ပါ။ နည်းပညာဆိုင်ရာအကန့်အသတ်တွေကြောင့် ဝစ်ရှင်နရီပရောဂျက်ကလွဲပြီး ကျန်ပရောဂျက်တွေမှာ အဲအတိုင်းလုပ်ရမှာပါ။ ကျေးဇူးပါ။ Ninja✮Strikers «☎» 03:13, 23 September 2021 (UTC)[reply]
@Ninjastrikers:,File:Wikipedia-logo-v2-blk.svgဖိုင်နဲ့ပက်သက်ပြီ ဒီမှာပဲတစ်ခါထဲမေးလိုက်မယ် ဝီခီဖီးဒီယာအမည်ကို ခင်ဗျာဘာအထောက်အထားနဲ့ ဝီခီပီးဒီးယားအမည်ဟု ပြောင်လဲလိုက်တာလဲ ဒါကိုရှင်းပေးပါ ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျာကပအိုဝ်စာပေပညာရှင်လား ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျာကတိုင်းရင်းသားစာပေအဖျက်သမားလား ခင်ဗျာကျွန်ပ်နဲ့ပြသနာတွေတတ်အောင်အမျိုးမျိုးလုပ်နေတယ်နော် ဒီဝီခီဖီးဒီယာအမည်အတွက်ကျွန်ပ်ပအိုဝ်ပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ် ဒီဝီခီဖီးဒီယာအမည်ဟာပအိုဝ်အများအတည်ပြုတယ်အမည်ဖြစ်တယ် ပအိုဝ်တွေနဲ့ခင်ဗျာဆွေးနွေးသင့်တယ် ပအိုဝ်တွေရဲ့အတည်ပြုချက်ကို ခင်ဗျာလေစာသင့်တယ် ခင်ဗျာမကူညီချင်နေပါ ရှုပ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ ဒါဟာဗမာအမည်စကားမဟုတ်ဘူး အဲ့တော့ခင်ဗျာပေးချင်တယ်အမည်ပေးမရဘူး ဒီအမည်နဲ့ပက်သက်ပြီခင်ဗျာနဲ့မဆိုင်ဘူး မူလပုံစံအတိုင်းပြန်ပြင်ပေးပါ ကျွန်ပ်ကခင်ဗျာနဲ့ပြသနာမတတ်အောင်ရှောင်းနေတယ်ကြာကခင်ဗျာလာရှုပ်တာ ဒါဘာသဘောလဲ ပြောရင်လည်းခင်ဗျာကမကြိုက်ဘူး ခင်ဗျာမကူညီလို့ကျွန်ပ်မပင်ပန်သွားဘူး ခင်ဗျာလာမရှုပ်ရင်ရပြီ မကူညီချင်လည်းဘာမဖြစ်ဘူး အက်မင်တွေကခင်ဗျာတစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ဘူး ခင်ဗျာမလုပ်လည်းတခြာအက်မင်တွေကလုပ်သွားလိမ့်မယ်--咽頭べさ (talk) 05:50, 23 September 2021 (UTC)[reply]
ခင်ဗျား ပထမဆုံးတင်လိုက်တဲ့ လိုဂိုဖိုင်က logo localization သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ လွဲနေခဲ့ပါတယ်။ အချိုးအစားမကိုက်တာ၊ စာလုံးတွေက ဘဲဥပုံဖြစ်နေတာ စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါကြောင့် စကေးကိုက်ဖြစ်အောင် ပြန်ပြန်တဲ့အခါမှာ အောက်က စာသားနှစ်ကြောင်းကို ပြန်ရိုက်ပေးဖို့ ပအိုဝ်းမိတ်ဆွေတွေကို ပြောတဲ့အချိန် စာလုံးမှားနေတယ်ဆိုပြီး အမှန်ပြင်ပေးခဲ့ကြလို့ စာနှစ်ကြောင်းလုံး ပြင်လိုက်ပါတယ်။ reference အနေနဲ့ ဒီပို့စ် က ပအိုဝ်းဝီကီပီးဒီးယား လို့ရေးထားတာကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ ဒါပါပဲ။ စကားမစပ် "ပအိုဝ်း" ပါ။ "ပအိုဝ်" မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး translatewiki မှာ ခင်ဗျားရဲ့ဘာသာပြန်တချို့ စာလုံးပေါင်းမှားနေတာတွေရှိလို့ ပြန်ပြင်ထားပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» 04:59, 26 September 2021 (UTC)[reply]
@Ninjastrikers:,ပအိုဝ်းကိုမွန်အသံအတိုင်းပအိုဝ်လို့ရေးတာလေ ကျွန်ပ်ကလည်း Facebook ပအိုဝ်ႏခမ်းသား-Pa'O People / Pa'O Language ကပေးတယ်အမည်အတိုင်းလုပ်တာလေ အခုပအိုဝ်းဝီကီဖြစ်လာဖို့သူတို့အကူညီနဲ့ကျွန်ပ်လုပ်ခဲ့တာ Pa'O Wikipedia Info ရဲ့အကောင့်ကလည်း ပအိုဝ်ႏခမ်းသား-Pa'O People / Pa'O Language အကောင့်နဲ့အတူတူပါပဲ ခင်ဗျာသူတို့နဲ့မေးမြန်းကြည့်ပါ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ ကျွန်ပ်လုပ်နေတာသူတို့ကိုယ်စားဖြစ်တယ် အခုကျွန်ပ်လုပ်နေတာကကိုယ်လုပ်ချင်းသလို လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး သူတို့လိုလာတယ်ပုံစံအတိုင်းလုပ်နေတာ အဲ့လောက်ကျွန်ပ်ပြောရင်ခင်ဗျာသဘောပေါက်မှာပါ စာလုံးကဘဲဥပုံဖြစ်နေတာ ကျွန်ပ်နဲ့မဆိုင်ဘူး Unicode fontတီထွင်းခဲ့သူနဲ့ဆိုင်တယ်--咽頭べさ (talk) 11:08, 26 September 2021 (UTC)[reply]
S'gaw Karen projects[edit source]
There isagroup on Facebook for S'gaw Karen Wikipedia and other projects. You can consult with them before supporting the projects. Thanks. Ninja✮Strikers «☎» 03:42, 28 September 2021 (UTC)[reply]
@Ninjastrikers:,It is not convenient for me to go and talk to them myself, but because my Facebook account was blocked for3months, but do not worry, I will send my dearest sister to talk to them on my behalf, thanks.--咽頭べさ (talk) 04:26, 28 September 2021 (UTC)[reply]
@우습게:,나의 가장 사랑하는 아이야 내가 너에게 말할게, 들어라 당신은 나를 대신하여 이 S'gaw Karen 그룹에 가서 그들과 이야기했습니다 모든 지침은 LINE으로 전송됩니다.--咽頭べさ (talk) 04:26, 28 September 2021 (UTC)[reply]
Meta Wiki[edit source]
Hello, seems that the Wp/blk project develops well. Would you createarequest of the language on meta so that it can be verified as eligible? --မ္ၚဵု (talk) 19:52, 30 September 2021 (UTC)[reply]
Hello@မ္ၚဵု:,Language request for Wp/blk not required yet, but thealanguage confirmation request for Wt/blk can be found at the link Wiktionary Pa'O below, if you know Pa'O language, you can help with Wp/blk, thanks.--咽頭べさ (talk) 20:58, 30 September 2021 (UTC)[reply]
Hi! Thank you for you kind message. Yes, I would like to ask you whether it would be possible to haveatranslation to Pa'O, Mon and/or Burmese of that article. A few lines would be fine. --Caro de Segeda (talk) 15:33, 28 December 2021 (UTC)[reply]
@Caro de Segeda:, Although it is not difficult to translate the Interlingue article, we have to discuss the title of the article because the vocabulary called Interlingue isavocabulary that many people in Burma have never heard of, once we have discussed the Interlingue article topic in our Facebook group, we will start translating the Interlingue article, I am currently working to get my own Pa-O wiki domain, thanks.--Music writer Dr.Intobesa of Japanese idol NMB48 and BNK48. (talk) 16:01, 28 December 2021 (UTC)[reply]
No worries, thanks for your help. Caro de Segeda (talk) 16:45, 28 December 2021 (UTC)[reply]
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=User_talk:咽頭べさ&oldid=5294070"
This page was last edited on 28 December 2021, at 16:45.